काम ठूलो कुरा हो | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
काम ठूलो कुरा हो
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:०५
डा. प्रकृति भट्टराई
चार वर्ष भयो म यो पेसामा लागेको । विगत दुई वषैदेखि सिलुचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोल्पामा कार्यरत छु । एम.डी. गर्न भनेर म आफ्नो घर काठमाडौंमा बिदामा बसेको थिएँ । त्यही बीचमा कोभिड–१९ आयो । अनि रोल्पा आउनुपर्यो । दुई जना मेडिकल अफिसर समेत हामी १४ जना कर्मचारी छौं यहाँ ।
सुरुमा काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भयो । जनशक्ति कम थियो । बिरामी जाँच गर, फिबर क्लिनिक चलाउ, क्वारन्टाइनको बिरामी पनि जाँच अनि कोरोनाबाहेकका एमरजेन्सीमा आउने बिरामीलाई पनि हेर । दुई जना डक्टरले सबतिर भ्याउनुपर्ने । एकदम गाह्रो हुन्थ्यो । शरीर पूरै थाक्थ्यो । डर पनि लाग्थ्यो । तर हामीले हार मानेनौं । निरन्तर बिरामी जाँचिरह्यौं । त्यो बेला हामीले पीपीई कति पटक रि–युज गरेर लगायौं । मान्छेहरू धेरै आउँथे । सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने । उनीहरूलाई जाँच्नुपर्‍यो । आफू पनि सुरक्षित त हुनुपर्‍यो । त्यही भएर प्लास्टिकले आफ्नो शररी ढाकेर पनि जाँच गर्‍यौं । पीपीई किन्छु भन्दा पनि पाइँदैन थियो । दुईचारवटा पन्जा काठमाडौंबाट लिएर आएको थिएँ ।
पछि गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग आयो । उहाँहरूले पीपीई उपलब्ध गराइदिनुभयो । त्यति बेला सजिलै पाइँदैनथ्यो पीपीई । अहिले त पहिलेभन्दा सजिलै पाइएको छ । केही दिनअघि प्रदेश सरकारबाट बिरामीलाई अक्सिजन दिने सामान आएको छ । अरू कुरा त यहाँसम्म आइपुग्दैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त हेपिएको केन्द्र भयो । बिरामीलाई अझ बढी सेवा सुविधा दिन सक्थेँ जस्तो लाग्छ तर हात बाँधिएको जस्तो महसुस हुन्छ । चाहिने सामग्री उपलब्ध हुँदैन । अनि कति बिरामीलाई अन्त पठाउनुपर्छ ।
मै गर्छु भनेर अघि बढन सबैलाई गाह्रै हुने रहेछ । पहिला सबै बिरामीलाई जाँच्न म आफै अघि सरेँ । यस्तो बेलामा प्रोत्साहन दिने मान्छे चाहिने रहेछ । उहाँहरूले नाइँ चाहिं भन्नुभएन । ‘मलाई त केही भएन तपाईंहरूलाई पनि केही हुन्न, केही पर्‍यो भने हामी छँदैछौँ, ब्याकअप सपोर्ट छौँ’ भनेर उहाँहरूलाई सम्झाएँ । अहिलेसम्म उहाँहरू साथमै हुनुहुन्छ ।
स्टाफ परिचालन गर्न गाह्रो त भएको छ । अहिलेसम्म जसोतसो गरिराखेको छु । मेरा साथीहरूलाई चाहिने सामग्री पुगेन भने म काम गर्दिनँ भनेर मैले गाउँपालिकामा कति पटक भनेको छु । त्यस्तो अडान लिनुपर्ने रहेछ । मलाई चाहिने सामान जसरी पनि पठाउनुपर्‍यो, नत्र काम गर्दिनँ भनेर जिल्लामा पनि भनेको छु । आफ्ना स्टाफलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेर काम गराइरहेको छु ।
उहाँहरूको नियमित जाँच पनि गराइरहेको छु । अहिलेसम्म हामी कसैलाई कोरोना लागेको छैन । आफूले जाँचेको मान्छेमा कोरोना भेटियो भन्ने सुन्दा सुरुमा ‘ला ! मलाई पनि सर्‍यो कि ?’ भन्ने डर लागेको थियो । उनको सम्पर्कमा आएका सबै जनाको र्‍याल जाँच गर्न पठायौँ । रिपोर्ट नआउन्जेल क्वारेन्टाइनमा बसेँ ।
त्यति बेला मनमा अनेकौ कुरा खेल्थे । रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भने के गर्ने होला ? यहाँको बिरामी कसले हेर्लान् ? काम कसरी चलाउने होला भन्ने लाग्थ्यो । पछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डर अलिकति कम भयो । अर्कोचोटि पनि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो । त्यसपछि चाहिँ पटक्कै डर लागेन । जे हुन्छ होस् भन्ने भएको थियो । आफू सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।
बिरामीको मुख देखेपछि कोरोना लागेकै भए पनि मैले सेवा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीं चाहिँ म पनि कमजोर हुन्छु । छाडेर हिँडौँ कि जस्तो पनि हुन्छ । तर मैले नगरे कसले गर्ने भनेर आफैलाई सम्हाल्छु ।
काउन्सिलिङ गर्न एकदम गाह्रो । बाहिर (भारत) बाट आउनु भएकालाई ‘जाँच गरेर मात्रै घर पठाउछौ’ भन्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘मैलै काहाँ कोरोना बोकेर आएको छु र ? मलाइ केहि भएको छैन । म कसैको सम्पर्कमै आएको छैन ।’
उहाँहरू सकेसम्म जँचाउन नखोज्ने । त्यस्तोलाई सम्झाउन एकदम कठिन हुन्छ । घण्टौसम्म राखेर सम्झाउनुपर्छ । समय त्यत्तिकै खेर जान्छ । त्यो समयमा अरू कति बिरामीलाई हेर्थें होला जस्तो लाग्छ ।
एकएक जना जाँच गर्न तयार भए पनि तुरुन्तै स्याम्पल लिन हामी सक्दैनौँ । पीपीई धेरै खर्च नहोस् भनेर धेरै जनाको स्याम्पल एकै पटक लिने गर्छौं । बहिरबाट आएका मानिसका छिमेकीहरूले त्यो मान्छेलाई रिपोर्ट नआईकन गाउँमा आउन दिनुहुन्न भन्छन् । यस्ले गर्दा उनीहरू झन् निरुत्साहित हुन्छन् । यस्तो बेलामा छिमेकीलाई समेत सम्झाउनुपर्छ ।
कोरोनाको शंका भएको भनेपछि एकदमै नराम्रो सोच्ने चलन छ । अलि पहिले अन्दाजी ४० वर्षका एक जना भारतबाट घर फर्कनु भएको थियो । क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि उहाँ घर जानु भएको थियो । उहाँले एक दिन मलाई फोन गरेर रुँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंले मलाई किन यस्तो गर्नुभएको ? मैले के रोग बोकेर आएको थिएँ र ? मलाई घरपरिवार र छरछिमेकमा नराम्रो व्यवहार गर्छन् । अँध्यारो कोठामा राखेका छन् । खाना पनि बाहिरबाटै फाल्दिन्छन् ।’
उहाँ साँच्चै उदास भइसक्नु भएको रहेछ । उहाँ र उहाँको परिवारलाई बोलाएर सम्झायौँ । कोरोना लागेका मान्छेलाई कलंक ठान्ने गरेका छन् ।
कामको बढी नै चाप छ । एक जना डक्टरले आइसोलेसनका सबै बिरामी हेर्नेुपर्छ । अर्को डाक्टरले अरू बिरामीलाई । आइसोलेसनमा काम गर्ने डाक्टरले २ हप्ता क्वरोनटाइनमा बस्नुपर्छ । त्यति बेला एक जना डक्टरले हेर्नुपर्छ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । गाह्रो त हुन्छ तर आफ्नो दायित्व हो, गर्नै पर्छ । हामीले न गरे कसले गर्ने ?
सरकारी अस्पतालमा आउन खोज्ने धेरै हुन्छन् । यहाँ पनि त्यस्तै छ । कहिलेकाहीं त म ३-४ दिनसम्म पनि सुत्दिनँ । पीपीई खोल्दा सबै लुगा भिजेको हुन्छ । पहिलो पटक स्तब्ध भएको थिएँ । लुगा यसरी पनि भिज्छ भनेर । निचोर्दा पानी निस्कने गरी भिज्छ लुगा । अनि बाफिन्छ । म चस्मा लगाउने मान्छे । एक पटक लगाएपछि त्यसलाई चलाउन मिल्दैन । बाफिएकै चस्माले बिरामी हेर्र्नुपर्छ । आधा देखिदैन ।
ल्याबका भाइहरूले स्याम्पल संकलन गर्न ठाउँठाउँमा घुमिराख्नुपर्छ । बाटो डरलाग्दो छ । कहिले बाटोमा दर्के पानी परिदिन्छ । त्यस्तो बेला पनि भिज्दै स्यम्पल संकलन गर्नुपर्छ । पीपीई लगाउनुअघि नै जति खाने हो खाने गर्छु । पानी धेरै पिउँदिनँ । बीचमा बाथरुम जानुपर्छ भनेर । पीपीई बचत गर्नुपर्छ नि ! कहिले मान्छे कुर्नपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा गाह्रो हुन्छ । खान पाइँदैन, बाथरुम जान पाइँदेन । पिरियड भएका बेला हिँड्नुपर्दा अप्ठेरो हुन्छ । कहिले यस्तो गर्मी हुन्छ कि पसिना बगेको बग्यै गर्छ । पीपीई लगाउँदा त्यति गाह्रो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन ।
सुरुमा त मेरो घरपरिवार आत्तिएको थियो । घरबाट फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो — ध्यान दिनु, पीपीई लगाएर मात्रै काम गर्नु । कहिले ‘कहाँ पाउनु पीपीई ?’ भन्थेँ । कति पटक त ‘अँ लगाएको छु’ भनेर घरको मान्छेलाई ढाँटेँ । उहाँहरूलाई अलि ढुक्क होस् भनेर । पछि रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको थाहा पाएपछि भने घरका मान्छे आत्तिन छाड्नुभयो । चार महिना भइसक्यो घर गएको छैन । परिवारको न्यास्रो लाग्छ । बच्चैदेखि काठमाडौंमा परिवारसँगै हुर्केबढेको मान्छे म । तनहुँमा काम गर्दा ओहरदोहर गर्थें । वीर अस्पतालमा काम गर्दा त कुरै भएन ।
यस्तो महामारीका बेला कामबाट पन्छिनु पनि भएन । घरमा ममी, बुबा, दाइ, भाउजू अनि अरू मेरो नातेदार साथीभाइहरूसित कुराकानी हुन्छ । परिवारका सदस्यले ‘यस्ता बेलामा छोरीले काम गरिरहेको छ, गर्व लाग्छ’ भन्दा हौसला मिल्छ । खुसी लाग्छ । तर घरपरिवारको न्यास्रो लाग्छ । संयुक्त परिवारमा बस्ने भएर पनि होला घरको धेरै न्यास्रो लाग्छ । बिदा मिलेपछि एक पटक घर जानुपर्ला भन्ने सोचेको छु । घर जान नपाएर आत्तिएको छु । तर यहाँ मेरो आवश्यकता छ । त्यसैले यहीँ बस्छु किनभने मेरा लागि काम ठूलो कुरा हो ।
यो कथा डा. प्रकृति भट्टराईसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।